मनोक्रान्ति योद्धाद्वारा बोलेरै विश्व रेकर्ड कायम
गजेन्द्रराज नेम्वाङ -
काठमाडौं । मनोक्रान्ति अभियानका योद्धा डा. अनन्तराम केसी (योगी श्री कं)ले लगातार ८० घण्टा ४ मिनेट बोलेर विश्व रेकर्डस् गिनीज बुकमा नाम दर्ताका लागि सिफारिस भएका छन् ।
उनले असोज १९ गते बिहीबार बिहान ६ बजेर ५८ मिनेटदेखि २२ गते आइतबार दिउँसो २ बजेर ५८ मिनेटसम्म लगातार प्रवचन दिएका थिए । यसअघि भारत गुजरातका आश्विन सुंडाईको ७५ घण्टा ३२ मिनेटलाई तोड्दै केसीले ४ घण्टा ४ मिनेट बढी प्रवचन दिएर गिनीज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डस्मा आफ्नो नाम दर्ता गराउन सफल भएका हुन् । लायन्स क्लब अफ काठमाडौं बिहानीको आयोजनामा भएको यो लङ्गेस्ट स्पिच म्याराथनका वक्ता नुवाकोटका हुन् ।
यसअघि डा. कं ले इलाममा २०६५ सालमा १३ घण्टा, २०६६ सालमा हेटौंडामा ३६ घण्टा, २०६७ सालमा हेटौंडामा नै ६३ घण्टा प्रवचन दिएका थिए । साथै उनले नेपालको ७५ वटै जिल्लामा ८५०० किलोमिटर पैदलयात्रा गरी काठमाडौंदेखि भारतको कन्याकुमारीसम्म ४ हजार किलोमिटरसम्म पनि पैदल यात्रा गरेका थिए ।
कार्यक्रम समापनको प्रमुख अतिथि मनोक्रान्तिका गुरु डा. योगी विकासानन्द थिए । उनले आमनेपालीहरुको निम्ति एक अनुकरणीय सहासिक काम अनन्तराम केसीले सिद्ध गर्नुभएको भन्दै राष्ट्र र सिङ्गो विश्वले गर्व गर्नुपर्नेमा जोड दिए । समापन कार्यक्रमको सभापतित्व नारायण रिजालले गरेका थिए ।